तपाईंको भान्सामा काठ र रंगीन फर्नीचर संयोजन गर्ने विचारहरू | बेजिया
तपाईंको भान्सामा काठ र रंगीन फर्नीचर संयोजन गर्ने विचारहरू
मारिया vazquez | 29/04/2022 18:00 | फर्नीचर
म पक्का छु कि तपाईं मध्ये धेरै को सपना छ सेतो भान्छा। यो भान्साहरू प्रस्तुत गर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय रंग हो, जसले यसलाई अझ बढी चमक प्रदान गर्दछ। यद्यपि, त्यहाँ अन्य कम अन्वेषण विकल्पहरू छन् जुन निर्णय गर्नु अघि विचार गर्न रोचक छ, जस्तै प्रयोग विपरीत काठको फर्नीचर।
स्थान विभिन्न रंगहरूमा कम र उच्च क्याबिनेटहरू भान्सामा रुचि र व्यक्तित्व थप्छ। र यो अवस्था पूरा गर्ने धेरै विकल्पहरू मध्ये, प्राकृतिक काठको फर्नीचर र रंगीन फर्नीचर संयोजन हाम्रो मनपर्ने मध्ये एक हो। यसैले हामीले आज तपाइँलाई केहि विचारहरू देखाउने निर्णय गरेका छौं जुन यस कन्ट्रास्टमा शर्त राख्छ।
La प्राकृतिक फिनिश संग काठ भान्सामा न्यानोपन ल्याउँछ। भान्साकोठालाई चिसो ठाउँ बनाउन सक्ने सेतो पर्खाल र फर्निचरको एकरसता तोड्न यो एक उत्कृष्ट थप हो। तर काठ पनि एक सामग्री हो जसले धेरै रङ संयोजनहरूको ढोका खोल्छ। एउटा तटस्थ रङ जसले हामीलाई भान्साकोठालाई सन्तृप्त गर्ने डर बिना आधारको रूपमा अन्य रंगहरूसँग खेल्न अनुमति दिन्छ। र यी रंगहरू के हुन्? यो जो कोही हुन सक्छ तर यहाँ पनि हाम्रा विजेताहरू छन्।
1 सेतो र क्रीम
2 कालो र खैरो
3 ब्लूज, हरियो र न्यानो टोन
सेतो र क्रीम
के तपाइँ रङ संयोजन खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाइँको भान्छामा प्रकाश ल्याउँछ र एकै समयमा यसलाई न्यानो र स्वागत ठाउँ बनाउँछ? तपाईंले यो फेला पार्नुभयो! काठको टोनमा कम क्याबिनेटहरू र उच्च सेतो क्याबिनेटहरू राख्नाले तपाईंको भान्सालाई ए चरित्र संग न्यानो, उज्यालो ठाउँ।
प्लेस गर्नुहोस् सेतो क्याबिनेटहरू माथि यसले यस क्षेत्रलाई हल्का देखाउनेछ, यसरी दृश्यात्मक रूपमा भान्साकोठा विस्तार गर्दै र तपाईंले खोजिरहनु भएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। कम क्याबिनेटहरूको लागि, तिनीहरूले यसलाई धेरै व्यक्तित्व दिनेछन् र तपाईंले रोज्नु भएको काठको टोनमा निर्भर गर्दै यसको शैलीलाई न्युन्स गर्नेछ।
यदि तपाईंको भान्सा सानो वा अँध्यारो छ भने हल्का काठ छान्नुहोस्। मिडटोन फर्नीचर यदि तपाईं आफ्नो भान्सालाई आधुनिक र आरामदायी स्पर्श दिन चाहनुहुन्छ भने ह्यान्डलहरू बिना। र avant-garde र जोखिमपूर्ण ठाउँहरू सिर्जना गर्न गाढा टोनहरू आरक्षित गर्नुहोस्।
कालो र खैरो
कालो वा खैरो टोनमा उच्च क्याबिनेटहरू राख्नुले एक प्रदान गर्नेछ आधुनिक र वर्तमान स्पर्श आफ्नो भान्सा को लागी ठूलो र राम्रोसँग उज्यालो भान्साकोठामा, तपाईंले निम्न छविहरूमा देख्न सक्ने जस्तो कालो ब्याकस्प्लास समावेश गरेर त्यो आधुनिक शैलीलाई सुदृढ गर्न सक्नुहुन्छ। भान्साको ध्यान जानेछैन!
तपाईंको भान्सा ठूलो छैन तर यो राम्रोसँग बत्ती छ? यद्यपि यो सानो ठाउँहरू सजाउन गाढा रङहरू सिफारिस गर्न असामान्य छ, त्यहाँ काम गर्ने तरिकाहरू छन्! कसरी? सुरुमा, सट्टेबाजी हल्का वा मध्यम काठमा आधार एकाइहरू र माथिल्लो क्षेत्रमा क्याबिनेटहरू मिलाएर सेल्फहरू यस क्षेत्रलाई दृश्यात्मक रूपमा हल्का बनाउन। जारी राख्न, पर्खाल, छत र ड्यासबोर्डमा सेतो रङ समावेश गर्दै।
ब्लूज, हरियो र न्यानो टोन
कालो र सेतोको बारेमा कुरा गरिसकेपछि, तपाइँ सायद सोचिरहनु भएको छ कि तपाइँ भान्साकोठामा के अन्य रंगहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ तटस्थता तोड्न यो। त्यहाँ धेरै हुन सक्छ, तर हाम्रा मनपर्नेहरू निस्सन्देह निलो, हरियो र न्यानो टोनहरू जस्तै पहेंलो वा सुन्तला हुन्।
प्रयोग गर्न को लागी एक पहेंलो र सुन्तला यो एक विकल्प हो जसको साथ थोरै हिम्मत गर्छन्। एक जोखिमपूर्ण विकल्प जुन तपाईले माथिको छविमा देख्नुभएको जस्तो भान्सामा धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ, प्लाईवुड क्याबिनेटहरू र रमाईलो कालो र सेतो सपनाहरूले सजाइएको। यो सबैको लागि होइन, तर यदि तपाइँ एक फरक, हर्षित विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ जुन निश्चित पुरानो प्रेरणा छ, यी रंगहरूले तपाइँलाई यो प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
साग र ब्लूज तिनीहरू अघिल्लो भन्दा बढी रूढ़िवादी विकल्प प्रतिनिधित्व गर्छन् तर समान रूपमा आकर्षक। तिनीहरू रङहरू हुन् जुन मध्यम र म्युट टोनहरूमा हामीले तपाईंलाई देखाउने जस्तै, भान्साकोठामा सुन्दरता ल्याउँदछ। र तिनीहरूले यसलाई बाहिर खडा हुन मद्दत गर्न सक्छन् जब यो बैठक कोठा र भोजन कोठा संग एक खुला र विशाल ठाउँ मा एकीकृत हुन्छ।
के तपाइँ विपरित क्याबिनेट संग भान्सा मनपर्छ? प्राकृतिक काठ क्याबिनेटहरू सिर्जना गर्न सुरु गर्नको लागि राम्रो सुरूवात बिन्दु बन्न सक्छ। तपाईंको भान्साकोठामा काठ र रंगीन फर्निचरहरू संयोजन गर्न र तपाईंको छनौट गर्न हाम्रा सबै विचारहरूको नोट लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » तपाईंको भान्सामा काठ र रंगीन फर्नीचर संयोजन गर्ने विचारहरू
मेडिटेरेनियन डाइट फूडहरू जुन कुनै पनि गर्भवती महिलाले लिनुपर्छ
सेन्ट प्याट्रिकको हातबाट छोटो पार्टी पोशाक